'သင်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တူချစ်သူ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်ပါသလော' နှင့်အခြားမေးခွန်းများ LGBT + မှလူများအားမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးပါသည် - သတင်း
'သင်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တူချစ်သူ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်ပါသလော' နှင့်အခြားမေးခွန်းများ LGBT + မှလူများအားမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးပါသည်
ဒီတနင်္ဂနွေလန်ဒန်အဖွင့်ပွဲအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် LGBTTQQIAAP (လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ ရိုးရိုးလိင်၊ လိင်၊ လိင်၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ လိင်၊ လိင်၊
ဖက်ရှင်အကြံဥာဏ်တချို့ရနိုင်မလား။ သငျသညျအစဉျအမွဲကြက်နည်းနည်းနှင့်တူခံစားမိကြသည်မဟုတ်လော လူများသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင် Queer အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသောသူများကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခြင်းနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့ရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြခဲ့သည်။
Elliot, လိင်, စိန့် Andrews က, 20
ငါမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ငါခံစားသင့်ပုံကိုအသက်ရှင်ရန်ကြိုးစားနေတာပါ။ ငါဘာမှမပိတ်မိပါဘူး။ တချို့လူတွေကထိုးဖောက်တာ၊ တက်တူးထိုးတာတို့၊ ခြောက်ထုပ်ပိုးရတာတွေလုပ်ကြတယ်။
ငါရဟတ်ယာဉ် / ဒိန်ခဲနှင့်ကြက်သွန်ပြတ်သား / တံခါးဘူးသီးအဖြစ်သတ်မှတ်။
ဤထင်မြင်ချက်များသည် trans * လူများဖြတ်သန်းသွားသောနာကျင်မှုနှင့်ဝေဒနာတို့ကိုလုံးလုံးလျားလျားမေးခွန်းထုတ်သည်။ ဒီဟာကထူးဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူး ကျနော်တို့နိုးထနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ငါတို့ဘယ်သူလဲ
ဆမ်, ဂေး, မန်ချက်စတာ, 20
ဖြောင့်တဲ့သူတွေကငါ့ကိုအမြဲပြောတယ်မင်းငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့လား? ငါသည်သင်တို့ကိုဖြောင့် fuck ဆိုတဲ့နေဘာလို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ပါလိုပဲပြန်ကြား။
Gavin, လိင်တူချစ်သူ, စိန့် Andrews က, 19
သငျသညျ RuPaul ရဲ့ဆွဲပြိုင်ပွဲကြည့်ရှုပါသလားလူတွေကငါ့ကိုမေး? အဘယ်သူမျှမလိုပဲငါလိင်တူချစ်သူပေါ့ဒါပေမယ့်ငါ trashy တီဗီမကြည့်ကြဘူး။
သငျသညျမာနကိုမသွားအဘယ်ကြောင့်ထို့နောက်သူတို့ကပြောသလော ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဆင်ခြေမရှိကြပါဘူး။ ငါအိပ်ရတာကြိုက်တယ်
Will, ရိုးရိုး, စိန့် Andrews က, 19
ငါသူတို့ကလိင်တူချစ်သူရဲ့အခြေခံပေါ်မှာရိုးရိုးလေးအပေါ်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အတူငါအိပ်ပျော်နေသောရှိမရှိငါ့ကိုမေးမြန်းလူများစိတ်ပျက် - သူတို့သင်မြင်နိုင်သောပထမ ဦး ဆုံးအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူအိပ်ခဲ့လျှင်သင်ဖြောင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်မမေးလိမ့်မယ်!
asexual, စိန့် Andrews ကစာရာ
အဲဒါမင်းက mitosis ကနေတဆင့်မျိုးပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာလား။
Verity, ရိုးရိုး, စိန့် Andrews က, 19
ဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သောသူသည်သူ / သူကားအဘယ်သူနည်း
သငျသညျ '' တစ်ဖက်ကောက် '' ပါလိမ့်မယ်သည့်အခါမေးခံရခံရကိုမုန်း။ အချို့ယောက်ျားတွေကညဥ့်နက်မှသင့်ဆီသို့ထွက်လာပြီးသုံးဆယ့်ခြောက်ယောက်ကိုတောင်းဖို့ကောင်းသည်ဟုယူဆကြသည်။ သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်လိမ်ဖို့ပိုများပါတယ်အဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားကိုလောဘကြီးလို့ခေါ်တယ်။ မည်သူမဆိုဖြောင့်စုံသောစုံတွဲများကိုမေးလိမ့်မည်ထက်သင်၏လိင်မှုဆိုင်ရာဘ ၀ နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစရာမေးခွန်းများအမြဲတမ်းရှိနေသည်။
Elysia, Non-binary, London, 19
သူတို့ / သူတို့နာမ်စားအနည်းကိန်းမဟုတ် - သဒ္ဒါမမှန်ကန်ကြောင်းပါပဲ။
သင်တို့ရှိသမျှသည်အထူး snowflakes ဖြစ်ချင်တယ်။
အခုဘာကိုဖုန်းခေါ်လို့ရမလဲ အဆိုပါ LGBTQLMNOPQRSTUHDISNSJDND အသိုင်းအဝိုင်း?
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသင် Snapchat ရရန်မည်သို့
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံရသည့်သူများသည်ထင်မြင်ချက်တစ်ခုသာရှိပြီးသင်၌လူတစ် ဦး အားအမြင်ရှိခြင်းကိုသင်မုန်းနိုင်သည်။
ငါဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုရဲရဲရဲလုပ်ပြီး၊ bi ဒါမှမဟုတ် pan ကိုအညွှန်းအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခါငါရုတ်တရက်ကြီးမားတဲ့အကျပ်အတည်းကိုကြုံတွေ့ရစဉ်၊
ခရစ် , လိင်တူချစ်သူ, စိန့် Andrews က, 20
ဒါကပေးကမ်းဆက်လက်။ အကယ်စင်စစ်ထိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံး (the bisexual Pun လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်) အလုပ်ဖြစ်တယ်သူတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လွန်းသူတို့၏ ဦး ခေါင်းလှည့်သူကိုညာဘက်မိန်းကလေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီမဟုတ်လော
ငါအထင်ကရရုပ်ရှင် / တီဗီရှိုးမြင်ကြပြီလားငါ့အကြိုက်ဆုံးမေးနေသလဲ ငါဆိုလို, သင်တန်းငါရှိသည်, ဒါပေမယ့်သင်ငါ့ကိုရုပ်ရှင်၏ပါရမီအကြောင်းကို rant ချင်ချင်မဟုတ်လျှင်ဒါပေမယ့်ငါ Cheerleader ငါမမေးဘူး!
Kit, Non- binary, စိန့် Andrews က, 20
ဒါကကျွန်မအတွက်အရမ်းခက်တယ်၊ ငါကမင်းကို X လို့ခေါ်ပြီးငါနာမည်ကိုကြိုက်တယ်။ မင်းကို X လို့ခေါ်လို့ရမလား
Logan, လိင်နှင့် pansexual, စိန့် Andrews က, 22
အိုကေပေမယ့်မင်းသိတယ်ငါဇီ ၀ မြေးတွေတကယ်လိုချင်တယ်။
ဟန္န , asexual, Aberdeen, 21
လိင်တူချင်းချစ်တာကိုလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ရောင်စဉ်တန်းကဘာလဲဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သငျသညျ '' သူတို့အား '' လူမျိုး၏တ ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဂျက်ဂေး, Dublin, 19
လူတွေကကျွန်တော့်ကိုပြောကြပေမယ့်တခြားသူတွေကမကျေနပ်တဲ့မှတ်ချက်တွေပေးပြီးနောက်ငါအဲဒီအရာတွေကိုမပြောဘူး။ သင်တစ် ဦး တွန်းလှန်နှင့်အတူမိတ်ဆွေဖြစ်လျှင်သင်ကမဟာမိတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခေါ်နိုင်ပါ။
ငါမာနပွဲတော်များစိမျ့ခဲ့ပုံကိုမုန်း။ ငါအားလုံးမဟာမိတ်များကိုလက်ခံဖို့အကြောင်းပေါ့, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့် Dublin မာန '' သက်တံနှင့်အတူစိန့်ပက်ထရစ်နေ့ '' ဖြစ်လာသည်။
ဖြောင့်သောသူတို့သည်မြို့လယ်ခေါင်တွင်အရက်မူးစေရန်ဆင်ခြေအဖြစ် သုံး၍ Drag Queens နှင့်အတူဓာတ်ပုံများရိုက်ကြသည်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းက Pride မှာမသက်မသာခံစားရတယ်။ သူမသည်သူမ၏ရည်းစားနှင့်အတူရှိပြီးသူတို့၏ Snapchat ပုံပြင်များအတွက်လိင်တူချစ်သူနှင့်အတူဓာတ်ပုံများရချင်သူကိုအရက်မူးဖြောင့်ကလူများ၏နှောင့်ယှက်ခံရတစ်နေ့လုံးနေခဲ့
Emma, ​​cis pansexual, စိန့် Andrews က, 21
ဒီမှတ်ချက်များကဒီလ၊ မာနသည်လသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏တုန့်ပြန်မှုအပြင်၊ မာနထောင်လွှားမှုချီတက်ပွဲများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားများသည် LGBTTQQIAAP အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သာတူညီမျှမှုရရှိစေရန်ကူညီရာတွင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။